‘प्रश्न गर्नैको निम्ति यो कविता संग्रह ल्याएको हुँ’-लेखक मुकारुङ «
‘प्रश्न गर्नैको निम्ति यो कविता संग्रह ल्याएको हुँ’-लेखक मुकारुङ
प्रकाशित मिति :3August, 2019 7:42 pm
काठमाडौँ । सोचेको भन्दा उपस्थिति बेग्लै भएकोमा उनी औँधी खुसी देखिन्थे । सोचेका थिएनछन्, हलभित्र यतिका धेरै खचाखच दर्शक भरिभराउ हुनेछन् । तर, उनले सोचेभन्दा दर्शकको चाप थेगिसनसक्नु भयो । कतिपय दर्शकले भित्र के भइरहेको छ, आवाज मात्र सुनेर हलबाट बाहिर निस्क्नुपर्यो । कार्यक्रम सञ्चालकले लेखक राजन मुकारुङलाई बोल्न माइक दिएलगत्तै ताली बज्छ । त्यसपछि बोल्न थाल्दछन् सिर्जनशिल अराजकता अभियन्ता तथा पाँचौ कविता संग्रह ‘हाटा जाने अघिल्लो रात’ का लेखक मुकारुङः
‘साह्रै खुसी लागेको छ । मेरा अगाडि आदरणीय व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ । साह्रै माया गरिदिनुभएको छ । लागेको थियो कवितामार्फत् दर्शकबाट कति माया पाउँछु होला ?तर, यो उपस्थितले गबजले उत्साह र जोसिलो बनाइदिएको छ ।’
‘म यहाँ धेरै कुरा भन्न चाहन्न । कविता यस्तो हुनुपर्छ, यसरी लेख्नुपर्छ भनेर आफ्ना कुराहरु राख्ने मनसाय पनि छैन । र, राख्न पनि उपयुक्त ठान्दिन । मैले यो कविता संग्रह किन ल्याएको हुँ त ? भन्नेबारेमा त छोटो चर्चा गर्न चाहन्छु ।’
‘हिजोदेखि परिवर्तन, सामाजिक रुपान्तरण र न्यायको लागि अत्यन्त आन्दोलित भएर लेख्ने कविहरु कुनै न कुनै माक्र्सवादी विचारधारा, प्रगतिशिल आन्दोलनसँग नजिक थिए । तर, अहिले त्यहिँ दुई तिहाईसहितको माक्र्सवादी विचारधारा बोकेको पार्टी सरकारमा सत्तासिन छ । धेरै प्रगतिशिल कविहरुले यो सत्ताले गरिरहेको कामसँग प्रश्न गर्लान् कि भनेर कविता लेखेको तर, उत्तरमा चाहिँ त्यतिबेवाका प्रगतिशिल कविहरु सत्ताकै भजन गाउनमा तल्लिन देखिइरहेको हुनालो कम्तिमा प्रश्न गर्नैको निम्ति यो कविता संग्रह ल्याएको हुँ । यो भन्दा पर गएर बोल्न चाहन्छु । र, माइला लामा कविता वाचन गरेर विदा हुन चाहन्छु…।’
मूलाटो हिँड्नेहरुका विरुद्ध
हार्माेनियममा गोरेटोहरुका गीत बजाउँदै
उभिएको छु ठीक यहीँ दोबाटोमा ।
तिमी भेटिन्नौँ यहाँ
यहाँबाटै तिमी छुटेका थियौँ
यहाँबाटै तिमी आफूँ ‘मूलबाटो हुँ’ भनेर गएका थियौँ ।
परपरसम्म देख्नलाई मेरा आँखा छैनन्
परपरका कुरा मेरा कानले सुन्दैनन्
‘ट्रिगर’ दबाउनका लागि मसित औँलाहरु छैनन्
(कामरेड भन्ने मनले मान्दै मानेन योबेला)
मात्रै हिजोको साथी सम्झिएँ
म यहिँ दोबाटोमा
हार्माेनियममा गोरेटोहरुका गीत बजाउँदै छु
यहाँबाट तिमी आफू ‘मूलबाटो हुँ’ भनेर गएका थियौँ ।
तिम्रै सत्ताको विरुद्धमा गीत गाउन बाध्य छु यतिबेला
मलाई मार्न बन्दुक छ तिमीसित
मलाई थुन्न जेल छ तिमीसित
सबभन्दा ठूलो कुरा त
मलाई फसाउन झेल छ तिमीसित ।
विचारचाहिँ पूरै त्यागिसक्यौ
अनि कसरी मार्न सक्छौँ मलाई ?
कता पर्छ तिम्रो मूलबाटो ?
तिमी आफैँलाई थाहा छैन ।
हो, तिमी भेटिन्न यहाँ
यहाँबाटै तिमी आफू ‘मूलबाटो हुँ’ भनेर गएका थियौँ
मूलबाटो मात्रै हिन्नेहरुका विरुद्ध
उभिएको छु यही दोबाटोमा
म अर्थात् माइला लामा ।
मदन पुरस्कार विजेता समेत भइसकेका मुकारुङले शुक्रबार पाँचौ कविता संग्रह ‘हाटा जाने अघिलो रात’को ‘माइला’ लामा कविता सुनाउनुअगाबै कार्यक्रको सुरुवातमै अहिलेका चर्चित नायक दयाहाङ राईले ‘गाउँ’ शीर्षक कविता बाचन गरिसकेका थिए । त्यसपछि समाजशास्त्री तथा अध्यता कैलास राई पनि कविताको बारेमा दर्शकलाई जानकारी दिए । उनले कविताले नारी मुक्ति र विद्रोहको आवाज बोलेको बताइन् । त्यसपछि कान्तिपुरका पत्रकार यज्ञशले कवितामार्फत् संस्कृति, पहिचान, विद्रोहको विषयमा बुलन्द आवाज निकालेको बताए ।
विमोचनपछि पुस्तकको पानामा नाम र हस्ताक्षर गर्न व्यस्त रहेका कवि मुकारुङ समय पाउनासाथ दर्शकसँग फोटो खिचेको देखिन्थ्यो । फोटो खिचे लगत्तै उनी दर्शकको हातमा परेको किताबको पानामा नाम र हस्ताक्षर गर्न तल्लिन देखिन्थे ।
त्यसो त पुस्तकको साजसज्जामात्र आकर्षक नभएर मुकारुङको कविताको वजन कति छ त ? सबैले एकचोटी किनेर नपढी हुँदैन । सबैका लागि ‘हाटा जाने अघिल्लो रात’ ले साँच्चिकै छटपटी ल्याइदिनेछ ।
किराँती कला सँस्कृति झल्काउने निनाम हाङ राईको “मैना मैनी” गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ
बुढानीलकण्ठ साहित्य समाजद्वारा विशेष कविगोष्ठी तथा कृतिको बिमोचन गरियो
-शान्ती नाछिरिङ काठामाण्डौ -बुढानीलकण्ठ साहित्य समाजले विशेष कवि गोष्ठी तथा विमर्श कार्यक्रम सहित समाजका अध्यक्ष
“सिमानामा हाम्रो भुमी मिच्न नखोज” गित बाटै गितकार गदालले दिए भारतलाई कडा चेतावनी
मुन्धुमस्टार – “दिन ढल्यो अँधेरी रातमा, यो मन जल्यो निष्ठुरिको यादमा” कुन शहरमा घुम्दै होला
यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ